ခြောမောလှပတဲ့ “ပွညျ့တနျဆာအိမျ၌ ဝါဆိုခွငျး” .... - MM Live News
ခြောမောလှပတဲ့ “ပွညျ့တနျဆာအိမျ၌ ဝါဆိုခွငျး” ….
January 13, 2020 MM Live
ဝါဆိုခြင်း ဓလေ့ စတင်ဖြစ်တည်လာခဲ့စဉ်က ရဟန်းတွေဟာ ဒီကနေ့ခေတ်လို တစ်စုတစ်ဝေးထဲ ဝါဆိုနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သေးဘူး။ အလွန်များပြားတဲ့ ရဟန်းတွေ အနေနဲ့ဝါတွင်း ခရီးသွားလာခြင်း မပြုရ ဆိုတဲ့ ဝိနည်းကိုလည်း ထိန်းရမှာ တစ်ကြောင်း…
လူနေအိမ် တစ်အိမ်ထဲမှာ ရဟန်းတွေ အများကြီး ဝင်ရောက် တည်းခိုဖို့ မသင့်တော်တာက တစ်ကြောင်းကြောင့် ရဟန်းတစ်ပါးကို အိမ်တစ်အိမ်ကျ ဝါဆိုနိုင်ဖို့ အတွက် ရှာဖွေ ခဲ့ရတယ် ဆိုတယ်။
အားလုံး အုတ်အော်သောင်းနင်းနဲ့ ဝိုင်းအော် ကန့်ကွက် ကြတော့တာပဲ။ မဖြစ်ဖူးပေါ့။ ပြည့်တန်ဆာ အိမ် လိုက်နေတဲ့ ရဟန်း… ဘယ်လာ ကောင်းနိုင်တော့မှာပေါ့။ ပျက်စီးတော့မယ်။
ညားပြီး ပြန်လာတော့မယ်။ ဝိနည်းတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ချိုးဖောက်တော့မယ် စသဖြင့် ဖြစ်လာနိုင်ချေတွေကို တစ်ယောက်တစ်ပေါက် စတင် ရေရွတ်ကြတယ်။
ဗုဒ္ဓက ငြိမ်ငြိမ်လေး နားထောင်နေပြီး သူတို့ တိတ်တော့မှသာ မိန့် တယ်။ “မင်းတို့… မင်းတို့ ထင်သမျှတွေဟာ ခုထိတော့ အထင်တွေ ချည့်ပဲ။ ဒီ အထင်တွေ ဖြစ်လာ မလာကို ငါတို့ သုံးလ တူတူ စောင့်ကြည့်ကြပါစို့။
ခုတော့ ငါ့အနေနဲ့ ဘာလို့ ပေးသွားတယ် ဆိုတာ ရှင်းမပြနိုင် သေးဘူး” အားလုံးဟာ သိပ် ကျေနပ်ကြပုံ မပေါ်။ဒီနောက် ဖိတ်ခံရတဲ့ ရဟန်းလည်း ပြည့်တန်ဆာ အိမ်မှာ လိုက်နေတာပေါ့။
အဲ့ဒီ နေစဉ် ကာလ တစ်လျှောက် ဗုဒ္ဓရဲ့ သာဝကတွေရော… နောက်လိုက် ရဟန်းတွေရော ပြည့်တန်ဆာ အိမ်နား ရစ်သီ ရစ်သီ သွားပြီး အကျိုးအကြောင်း နားစွင့်ကြတယ်။
တခါတရံမှာ သူတို့ ပြည့်တန်ဆာရဲ့ တေးဆိုသံ လေးတွေ ကြားရတယ်။ တခါတရံမှာ ရယ်မောသံနဲ့ ကခုန်သံလေးတွေ ကြားရတယ်။ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ စိတ်ပူစွာနဲ့ ဗုဒ္ဓ အနားကို လာလျှောက်ထားသူတွေ တဖြည်းဖြည်း များလာခဲ့တယ်။
ဗုဒ္ဓဟာ ဝါဝင်ခါစတုန်းကလို တိတ်ဆိတ်မြဲ… တိတ်ဆိတ်နေဆဲ။တစထက် တစ နောက်ယောင်ခံကြည့်သူတွေ စိတ်ကုန်လာကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဆီလည်း သွား လျှောက်မနေတော့ဘူး။ ပြည့်တန်ဆာ အိမ်နားလည်း သွားနားထောင် မနေတော့ဘူး။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဝါထွက်ခါ နီးလေလေ ပြည့်တန်ဆာ အိမ်ဟာ တိတ်သထက် တိတ်လာလေလေ ဆိုတာကို တစ်ယောက်မှ သတိမထားမိကြတော့ဘူး။သုံးလတင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့မှာ ရဟန်းဟာ ဗုဒ္ဓဆီကို ပြန်လာတယ်။
သူ့နောက်မှာ ပြည့်တန်ဆာလည်း တိတ်ဆိတ်စွာ ပါလာတယ်။ တခြားသော ရဟန်းတွေဟာ ဒီကိုယ်တော်ကို မြင်တော့ ရွံရှာဟန်နဲ့ ဘေးကို ရှောင်ကြတယ်။
“တွေ့လား.. သုံးလလောက် ပျော်နေရတာကို အားမရနိုင်ဘူး။ မယားပါ ခေါ်ပြန်လာသတဲ့လေ” အစရှိတဲ့ ပုတ်ခတ် ပြစ်တင်သံတွေ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ကြားနေရတယ်။ ဗုဒ္ဓရှေ့ရောက်တော့ ပြည့်တန်ဆာက လျှောက်တယ်။
“တပည့်တော်ဟာ ကိုယ့်အလှကို ကိုယ် ရတနာတစ်မျိုး ကဲ့သို့ တန်ဖိုးထားပါတယ်။ ခု ဒီရဟန်းကို စတွေ့တဲ့ နေ့က အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် မေတ္တာမျှမိခဲ့တယ်။
ငါ့အလှနဲ့သာ စည်းရုံးလိုက်မယ် ဆိုရင် ဒီရဟန်း ဘယ် ပြေးလွတ်မလဲလို့ တွေးမိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲ စည်းရုံးပါစေ… ဘယ်လိုပဲ သူ့ကို ဖြားယောင်း နေပါစေ… ရဟန်းငယ်ရဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို ဖျက်မရနိုင်ခဲ့ဘူး။”
“တလောကလုံးမှာ အဖိုးအတန်ဆုံးလို့ ထင်ခဲ့မိတဲ့ ကိုယ့်အလှဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတောင် မတုန်လှုပ်စေတဲ့အခါ တပည့်တော် မာနတွေ တစ်စစီ ကျိုးကုန်ပါပြီ။ တချိန်ထဲမှာ သူ့ကို ကြည့်ပြီး သူ့လို စိတ်အေးချမ်း ချင်လာတယ်။
အရာရာကို သူ့လို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ကျော်ဖြတ်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ တွေးမိလာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တပည့်တော်ကို ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် နောက်လိုက်တပည့် အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးတော်မူပါ” လို့ လျှောက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့က ပြည့်တန်ဆာတစ်ယောက် ဘိက္ခူနီဘဝကို စတင် ပြောင်းလဲတဲ့ နေ့ဖြစ်သလို အမှားမြင်ခဲ့တဲ့ လူတစ်စု အမှန်ပြင်ခဲ့တဲ့ နေ့တစ်နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။kyawnge (ဘာသာပြန်) လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်
“ပွညျ့တနျဆာအိမျ၌ ဝါဆိုခွငျး” – ဇငျပုံပွငျ (အရမျးကောငျးတဲ့ ဥပမာတဈခုပါ)
ဝါဆိုခွငျး ဓလေ့ စတငျဖွဈတညျလာခဲ့စဉျက ရဟနျးတှဟော ဒီကနခေ့တျေလို တဈစုတဈဝေးထဲ ဝါဆိုနိုငျခွငျး မရှိခဲ့သေးဘူး။ အလှနျမြားပွားတဲ့ ရဟနျးတှေ အနနေဲ့ဝါတှငျး ခရီးသှားလာခွငျး မပွုရ ဆိုတဲ့ ဝိနညျးကိုလညျး ထိနျးရမှာ တဈကွောငျး…
လူနအေိမျ တဈအိမျထဲမှာ ရဟနျးတှေ အမြားကွီး ဝငျရောကျ တညျးခိုဖို့ မသငျ့တျောတာက တဈကွောငျးကွောငျ့ ရဟနျးတဈပါးကို အိမျတဈအိမျကြ ဝါဆိုနိုငျဖို့ အတှကျ ရှာဖှေ ခဲ့ရတယျ ဆိုတယျ။
အားလုံး အုတျအျောသောငျးနငျးနဲ့ ဝိုငျးအျော ကနျ့ကှကျ ကွတော့တာပဲ။ မဖွဈဖူးပေါ့။ ပွညျ့တနျဆာ အိမျ လိုကျနတေဲ့ ရဟနျး… ဘယျလာ ကောငျးနိုငျတော့မှာပေါ့။ ပကျြစီးတော့မယျ။
ညားပွီး ပွနျလာတော့မယျ။ ဝိနညျးတှေ တဈခုပွီး တဈခု ခြိုးဖောကျတော့မယျ စသဖွငျ့ ဖွဈလာနိုငျခတြှေကေို တဈယောကျတဈပေါကျ စတငျ ရရှေတျကွတယျ။
ဗုဒ်ဓက ငွိမျငွိမျလေး နားထောငျနပွေီး သူတို့ တိတျတော့မှသာ မိနျ့ တယျ။ “မငျးတို့… မငျးတို့ ထငျသမြှတှဟော ခုထိတော့ အထငျတှေ ခညျြ့ပဲ။ ဒီ အထငျတှေ ဖွဈလာ မလာကို ငါတို့ သုံးလ တူတူ စောငျ့ကွညျ့ကွပါစို့။
ခုတော့ ငါ့အနနေဲ့ ဘာလို့ ပေးသှားတယျ ဆိုတာ ရှငျးမပွနိုငျ သေးဘူး” အားလုံးဟာ သိပျ ကနြေပျကွပုံ မပျေါ။ဒီနောကျ ဖိတျခံရတဲ့ ရဟနျးလညျး ပွညျ့တနျဆာ အိမျမှာ လိုကျနတောပေါ့။
အဲ့ဒီ နစေဉျ ကာလ တဈလြှောကျ ဗုဒ်ဓရဲ့ သာဝကတှရေော… နောကျလိုကျ ရဟနျးတှရေော ပွညျ့တနျဆာ အိမျနား ရဈသီ ရဈသီ သှားပွီး အကြိုးအကွောငျး နားစှငျ့ကွတယျ။
တခါတရံမှာ သူတို့ ပွညျ့တနျဆာရဲ့ တေးဆိုသံ လေးတှေ ကွားရတယျ။ တခါတရံမှာ ရယျမောသံနဲ့ ကခုနျသံလေးတှေ ကွားရတယျ။ တဈနထေ့ကျ တဈနေ့ စိတျပူစှာနဲ့ ဗုဒ်ဓ အနားကို လာလြှောကျထားသူတှေ တဖွညျးဖွညျး မြားလာခဲ့တယျ။
ဗုဒ်ဓဟာ ဝါဝငျခါစတုနျးကလို တိတျဆိတျမွဲ… တိတျဆိတျနဆေဲ။တစထကျ တစ နောကျယောငျခံကွညျ့သူတှေ စိတျကုနျလာကွတယျ။ ဗုဒ်ဓဆီလညျး သှား လြှောကျမနတေော့ဘူး။ ပွညျ့တနျဆာ အိမျနားလညျး သှားနားထောငျ မနတေော့ဘူး။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဝါထှကျခါ နီးလလေေ ပွညျ့တနျဆာ အိမျဟာ တိတျသထကျ တိတျလာလလေေ ဆိုတာကို တဈယောကျမှ သတိမထားမိကွတော့ဘူး။သုံးလတငျးတငျးပွညျ့တဲ့နမှေ့ာ ရဟနျးဟာ ဗုဒ်ဓဆီကို ပွနျလာတယျ။
သူ့နောကျမှာ ပွညျ့တနျဆာလညျး တိတျဆိတျစှာ ပါလာတယျ။ တခွားသော ရဟနျးတှဟော ဒီကိုယျတျောကို မွငျတော့ ရှံရှာဟနျနဲ့ ဘေးကို ရှောငျကွတယျ။
“တှလေ့ား.. သုံးလလောကျ ပြျောနရေတာကို အားမရနိုငျဘူး။ မယားပါ ချေါပွနျလာသတဲ့လေ” အစရှိတဲ့ ပုတျခတျ ပွဈတငျသံတှေ ဘေးတဈဖကျတဈခကျြမှာ ကွားနရေတယျ။ ဗုဒ်ဓရှရေ့ောကျတော့ ပွညျ့တနျဆာက လြှောကျတယျ။
“တပညျ့တျောဟာ ကိုယျ့အလှကို ကိုယျ ရတနာတဈမြိုး ကဲ့သို့ တနျဖိုးထားပါတယျ။ ခု ဒီရဟနျးကို စတှတေဲ့ နကေ့ အမှနျအတိုငျး ပွောရရငျ မတ်ေတာမြှမိခဲ့တယျ။
ငါ့အလှနဲ့သာ စညျးရုံးလိုကျမယျ ဆိုရငျ ဒီရဟနျး ဘယျ ပွေးလှတျမလဲလို့ တှေးမိခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျလိုပဲ စညျးရုံးပါစေ… ဘယျလိုပဲ သူ့ကို ဖွားယောငျး နပေါစေ… ရဟနျးငယျရဲ့ တညျငွိမျမှုကို ဖကျြမရနိုငျခဲ့ဘူး။”
“တလောကလုံးမှာ အဖိုးအတနျဆုံးလို့ ထငျခဲ့မိတဲ့ ကိုယျ့အလှဟာ ယောကျြားတဈယောကျကိုတောငျ မတုနျလှုပျစတေဲ့အခါ တပညျ့တျော မာနတှေ တဈစစီ ကြိုးကုနျပါပွီ။ တခြိနျထဲမှာ သူ့ကို ကွညျ့ပွီး သူ့လို စိတျအေးခမျြး ခငျြလာတယျ။
အရာရာကို သူ့လို တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့ ကြျောဖွတျနိုငျရငျ ကောငျးမယျလို့ တှေးမိလာတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ တပညျ့တျောကို ဖွဈနိုငျမယျဆိုရငျ နောကျလိုကျတပညျ့ အဖွဈ သတျမှတျပေးတျောမူပါ” လို့ လြှောကျပါတယျ။
အဲ့ဒီနကေ့ ပွညျ့တနျဆာတဈယောကျ ဘိက်ခူနီဘဝကို စတငျ ပွောငျးလဲတဲ့ နဖွေ့ဈသလို အမှားမွငျခဲ့တဲ့ လူတဈစု အမှနျပွငျခဲ့တဲ့ နတေ့ဈနလေ့ညျး ဖွဈပါတယျ။kyawnge (ဘာသာပွနျ) လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈ
စီးပှားလာဘျလာဘ တိုးတကျအောငျမွငျရနျ ကွာသပတေးသားသမီးမြားအတှကျ အထူးယတွာ….
စီးပွားရေး လုပ်ချင်သူများအတွက် ( အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ ဖတ်သွားစေချင်ပါတယ် )
September 29, 2018 MM Live
November 23, 2018 MM Live